Muuri News Network » Tirada Ciidanka AMISOM ee Somalia ku Geeryootay 2009-2015..(Aqriso)
Tirada Ciidanka AMISOM ee Somalia ku Geeryootay 2009-2015..(Aqriso)
Daraasad uu soo saaray Macadka Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) – oo ka hadlay arimaha difaaca iyo Militeriga Aduunka, ayaa waxaa uu sheegay in Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM) ay gudaha soomaaliya kagag geeryoodeen 1,100 oo askeri tan iyo 2009.
Paul Williams, oo ah borofisar-ka Arrimaha caalamiga ee jaamacada George Washington University, ayaa sheegay in daraasad la soo saaray dhawaan. Prof Williams ayaa sheegay in la soo ururiyey macluumaad laga helay Amisom, kaas oo muujinaya in 69 askeri oo AMISOM ah la dilay sanadkii aan soo dhaafnay iyada oo ay sababtu tahay tallaabo colaad.
Ururka Midowga Afrika ayaa sheegay in tiradaasi askarta ah ee geeryootay in aysan kamid aheed kuwa ugeeryooday sababaha, sida jirro ama shil.
Tiradda wadareynta warbixinta ee ay soo saareen qubaradaan fadhigoodu yahay dalka Sweden ayaa sare ugu kacday 384 sanadkii 2012 iyadoo hoos ay ugu dhacday 94 sanadkii 2011.
Prof Williams ayaa ku daray in tirade ku geeryootay soomaaliya in aysan ka mid aheen ciidamadii dowlada Kenya ee lagu dilay koorsadii loogu magacdaray “Operation Linda Nchi” kaasoo dowlada Kenya fulisay sanadkii 2011 ilaa 2012 si iskooda ah.
Waxaa sidoo kale aaney kamid aheen tiradda ciidamada dowlada Itoopiya oo iskugu jiray Police iyo Militeri oo Iyana ku geeryooday Somalia ingtii udhexeysay sanadadii 2011 ilaa 2014, ka dib markii ciidamada dalka Itoopiya uu la dirirayay Al Shabab, taasina waxaa ay ka dhigantahay in xiligaasi labada dowladood aysan ka mid aheed Howlgalka.
Amisom ayaa la bilaabay howlgalka soomaaliya sannadkii 2007, xili ay dowladda Uganda ay usoo dirtay soomaaliya 1,600 oo askeri kuwaasoo soo gaaray Magaalada Muqdisho. Ciidamada ayaa haatan tiro ahaan ka badan 22,000 oo askari oo iskugu jira Militery iyo booliska.
Sidoo kale Macadka Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI): ayaa sheegay in 439 askeri la dilay intii udhexeysay August 2009 iyo September 2012. Ilo kale ayaa sheegaya in ay tiradaasi ay ka dhigantahay in dhimashada Amisom in ay saddex jeer ka badan 1,100 tirakoobka hey’adda SIPRI, qiyaas ahaan.
Ku-xigeenka Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobe Jan Eliasson, ayaa sheegay in sanadkii 2013, in “ilaa iyo 3,000 oo askari oo Amisom ah la dilay tan iyo bilowgii faragelinta Midowga Afrika ee soomaaliya sanadkii 2007 ”. Laakiin Mr Eliasson ayaa soo bandhigay cadeymihiin ku aadan warbixinta taasoo markii dambe ay aragtay Qaramada Midoobe.
Paul Williams, oo ah borofisar-ka Arrimaha caalamiga ee jaamacada George Washington University,ayaa sidoo kale carabka ku adkeeyay in ay jiraa askar kale oo AMISOM ka tgirsan oo ka cawanayay dhibaatooyin soo gaaray.
Waxaa uu gaba-gabada uu yiri” Waa ay adag tahay in la tilmaamo sida shaqaale badan oo Amisom kamid ah loogu dilay soomaaliya, sababtoo ah ayuu yiri dalalka ciidamada usoo diray soomaaliya ayaa ka maagay in ay sheegaan khasaarahooda, ayuu yiri , Prof Williams.
Dowladaha soomaaliya usoo diray ciidamada ayaa waxaa ay kala yihiin Burundi, Jabuuti, Itoobiya, Kenya, Sierra Leone iyo Uganda, kuwaasoo sii daayay warbixino ku aadan macluumaadka ku saabsan khasaaraha soo gaaray.
Ciidamada Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM), ayaa waxaa ay weraro toos iyo kuwa kaleba ay kala kumaan Xarakada Al Shaba bee Soomaaliya, waxaana xiliyada kale duwan dhaca weraro gaadmo ah oo lagu qaadoa xaruumaha ciidamada Midowga Africa.
Sidoo kale waxaa jira xaruumo ay ciidamdu baneeyeen, oo kamid ah meelaha ugu muhiimsan ee saldhigyada u ah ciidamada.
Todobaadkii aan kazoo gudubnay ayaa waxaa ay baneeyeen saldhiga deegaanka Janale ee gobolka Shabellada hoose halkaasoo dhawaa looga dilay tiro gaareysay 50 askeri, inkasoo Diplomaasiyiin ay shegeen in ay AMISOM saldhigaasi loogu dilay 100 askeri.
Madaxda AMSIOM, ayaa ka maagay in ay sheegaan tirade rasmiga ee kagag geeryooytay, inkasto Al Shabab ay ku doodeen in 70 askeri ay kagag dileen.